Machad ku yaalla Burco oo lagu daweynayo dadka uu shubanku soo rito
Photo | Aadan Cumar oo faleembo ay kula socoto barsada machadka/Sadiiq Yuusuf Khalaf/Ergo
(ERGO) - Cudurka shuban-biyoodka oo ka dillaacay magaalada Burco iyo tuulooyinka u dhow ee gobolka Togdheer ayaa sababay dhimashada labo qof oo kala ahaa haweeney ay da’deedu ka weyneyd 80 sano iyo wiil saddex jir ahaa. Bukaanno gaaraya 74 qof oo qaba shubanka ayaa lagu daweynayaa Machadka Caafimaadka ee Burco, isbitaalka degmada oo la tacaalaya bukaanno qaba xanuunno kale ayaa xaruntaan u soo gudbinaya dadka shubmaya maadaama aanu heynin qeyb gaar ah oo uu seexiyo. Dadkan ayaa labadii toddobaad ee la soo dhaafay laga keenay xaafadaha magaalada iyo tuulooyinka.
Agaasimaha machadka, Faadumo Cismaan Axmed ayaa Raadiyo Ergo u sheegtay in labada qof oo dhimatay saddexdii bishan loo keenay xilli dambe oo aan xaaladdooda waxba laga qaban karin oo si aad ah u fuuq baxeen. Bukaannada ayay xustay inay siiyaan dawooyin fuuq- celiyeyaal iyo matag-joojin ah oo ay ku caawiyeen dadka magaalada oo dhaqaale iska ururiyay.
Xaaladdan darteed ayaa loo hakiyay howlihii ka socday machadka oo ilaa 300 oo arday ay ka baran jireen caafimaadka. Afar iyo labaatankii saac ee la soo dhaafay oo keliya 35 bukaan ayaa xarunta la seexiyay sida ay xaqiijisay Faadumo. Waxay intaa ku dartay in isu-duwaha wasaaradda caafimaadka ee gobolka uu ka codsaday inay machadka u banneeyaan bukaannada inta laga baxayo xaaladdan.
Ardaydii machadka qaarkood ayaa ka qeyb qaadanaya gurmadka. Bukaannada qaar waxaa lagu seexiyay sajaayado loo dhigay qolalka oo siddeed ah iyo barsada, kaddib markii ay buuxsameen lixdan sariirood oo laga keenay isbitaalka.
Faadumo ayaa sheegtay in isbitaalka degmada uu la ciirciirayo wax u qabashada bukaanno xanuunno kale iyo nafaqo-darro ka dhalatay abaarta qaba oo qeybihiisa kala duwan la seexiyay.
Waxay xustay in nadaafad-darro ka dhalatay biyo-yari ka jirta Burco iyo tuulooyinka ay sabab u tahay shubanka. Roobka gu’ga ayaa ka da’ay meelaha qaar, hase yeeshee waxay aaminsan tahay in haddii ay dadku cabaan xareed aan nadiif aheyn uu shubanku sii jiri karo.
Bukaannada jiifa xaruntan waxay u badan yihiin waayeel, haween iyo carruur. Waxaa ka mid ah Aadan Cumar oo ah 55 jir laga keenay tuulada Xayira oo 75 km dhanka bari ka xigta Burco. Wuxuu Raadiyo Ergo u sheegay inuu weli matagayo laakiin uu ka yaraaday shubanka markii dhowr faleembo ay ku dhamaadeen. “Weli xanuun ayaan dareemayaa, laakiin waan ka roonahay sidii hore iyo fuuq-bixii badnaa,” ayuu yiri isaga oo ku jiifa sajaayad taalla bersada.
Labadii May, xilli fiid ah ayuu shubanku ku billowday, waxaana subixii xigay lagu soo qaaday gaari uu leeyahay qof ay qaraabo yihiin oo uu ka codsaday inuu caawiyo.
Isbitaalka degmada iyo machadka waxay labaduba hoos tagaan wasaaradda caafimaadka Somaliland.